Warshadda Soo-saarista iyo Soo-saareyaasha CBD Shiinaha
mashiinka soo saarida ultrasonic ee soo saarista saliida muhiimka ah
Soosaarayaasha Ultrasonic sidoo kale loo yaqaan 'emulsifiers ultrasonic', waa qayb ka mid ah mawjadaha cusub ee sayniska soo saarista. Qaabkan hal-abuurnimadu aad ayuu uga qiimo jaban yahay teknoolojiyada kale ee casriga ah ee suuqa yaalla. Tani waxay ufurtay goobta ciyaarta ee howlaha yar-yar iyo kuwa dhexe si si weyn kor loogu qaado howlahooda soo saarista. Soo saarista Ultrasonic waxay wax ka qabtaa xaqiiqda dhibaatada leh ee cannabinoids, sida THC iyo CBD, dabiici ahaan waa hydrophobic. Iyada oo aan lahayn dareeraha adag ...
Qalabka wax soo saarka saliidda ee muhiimka ah ee ultrasonic
Waxyaabaha laga helo Cannabis (CBD, THC) waa molecules hydrophobic (ma aha biyo milma) Marka laga reebo dareeraha xanaaqa, badanaa way adag tahay in laga saaro cannabinoids qaali ah gudaha unugga. Teknolojiyada soo saarista Ultrasonic ayaa si wax ku ool ah u xallisa dhibaatadan. Soo saarista Ultrasonic waxay ku tiirsan tahay gariirka ultrasonic. Baadhitaanka 'ultrasonic' ee la geliyey dareeraha ayaa soo saaraya malaayiin goobooyin yaryar ah oo ah xaddiga 20,000 jeer halkii labaad. Xumbadahan ayaa markaa soo baxa, taas oo keeneysa in derbiga unugga difaaca uu gebi ahaanba dillaaco ...
Qalabka soo saarida sheybaarada ultrasonic CBD
Qalabka soosaarida sheybaarada ultrasonic CBD wuxuu tijaabin karaa heerka soo saarista iyo waqtiga soo saarista CBD ee dareeraha kaladuwan, wuxuu macaamiisha siin karaa xog kaladuwan waqti gaaban, wuxuuna aasaas u dhigi karaa macaamiisha si ay u ballaariyaan waxsoosaarka.
Qalabka soo saarida Xiinka ultrasonic
Awoodda xiiridda xoog leh ee ka timaadda cavitation-ka ultrasonic waxay dhex galeysaa unugyada dhirta, waxay ku riixdaa dareeraha cagaaran unugyada si ay u nuugaan una soo saaraan CBD
ultrasonic Cannabidiol (CBD) qalabka soo saarida hemp
Soo saarista Ultrasonic waxay dooran kartaa dareerayaal kala duwan iyadoo loo eegayo isticmaalka xiga ee CBD, taas oo si weyn u wanaajinaysa heerka soo saarista, gaabinaysa waqtiga soo saarista, waxayna ogaaneysaa soosaarida bey'ada u fiican iyo soosaarida waxtarka leh.